Thenye Hel bụ Paul Boutin? | Martech Zone
A ahịa jụrụ m na ekwentị taa, “Gịnị ka blog na-anọchi anya?”. M na-eme ka ọ mara na ọ dị mkpụmkpụ maka log web, ma ghọọ nke abridged blog. Nkeji ole na ole mgbe akpọchara m, anatara m ozi site n'aka ezigbo enyi m, Dr. Thomas Ho, bụ onye jụrụ, “Gịnị bụ echiche gị banyere nke a?” ọ hapụrụ m njikọ Paul Boutin si Ederede Wired, Twitter, Flickr, Facebook Mee Blọọgụ Anya Ya mere 2004.
Agụrụ m edemede ahụ ma ọ bụghị naanị na enweghi mmetụta, enwere m mmechuihu na Wired maka ịnakwere ịnwe ọwa a dị ka ihe kwere ekwe. Ọ na-ewute m n'ezie na mmadụ ga-ewere okwu ihu ọha ha wee dee edemede - ya enweghị data na-akwado.
Onye hel bụ Paul Boutin, M na-eche? Nke a ọ bụ ụdị amụma amụma mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Guru ahịa? Ọkachamara nkwukọrịta? Nope.
Paul Nwokocha Bio: N'okwu yaM gara MIT. Agaghị m agụsị akwụkwọ. M tolitere na Maine na-arụ ọrụ, mana m bi na San Francisco. Afọ 20 nke ihe omuma teknụzụ ihe ọmụma na ihe iri na abụọ na-ede maka mbipụta mba. Nke a na-akọwa ihe niile gbasara m mkpa ka ị mara.
Chaị. Paul Boutin bụ onye mmekorita nke Silicon Valley asịrị saịtị Valleywag.
Kedu ihe bụ Valleywag? Ahem… ọ bụ blog….
Ana m atụ anya ndị folks nwere Valleywag ozugbo na-adọta plọg ahụ dabere na nzaghachi ọmụma ọmụma Paul na-enweghị atụ. Paul na-arapara na okpu eji eme chiiz, ugogbe anya maka anwụ, ọla aka na asịrị. Ma pụọ Wired, ị na-eme ha anya ọjọọ.
Adọkpụla ihe nkwụnye ahụ na Blog gị
Anyị enweela nsogbu dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị enweela ụlọ ọrụ dị iche iche na-ezo n'azụ mkpọsa ngwá ahịa, nkwupụta okwu, ma ọ bụ njakịrị site n'aka ndị ahịa ha jere ozi. Anyị enwetụbeghị ndị na-ahụ maka ọha na eze ime ka ụlọ ọrụ mara anyị echiche. Anyị enwebeghị ebe anyị ga-etinye anyị olu. Blọọgụ enyela anyị usoro a.
Olu anyị dị oke ụda, n'oge na-adịbeghị anya, na ụlọ ọrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ege ntị ma na-aza. Blọọgụ na-apụta n'akụkụ ụwa niile. A na-ejide ụlọ ọrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ọkwa dị elu ma chọọ ka ha nwee nghọta. Wa na-agbanwe. Ọ bụkwa olu anyị mere ya.
Onye na-ajụ ajụjụ ahụ agbanweela nke ọma na ụlọ ọrụ na-achọpụta uru na ya. Ugbu a ha na-amata na usoro nnweta site na injin ọchụchọ bụ atụmatụ dị oke ọnụ ala. Ugbu a ha ghọtara na nghọta na mkparịta ụka na-aga n'ihu na ndị ahịa na atụmanya bụzi ihe eji ejide ihe. Ndị ụlọ ọrụ, dị ka ụlọ ọrụ ịde blọgụ ngwa na m na-arụrụ ọrụ maka, na-emecha na-ege ntị… na mmezu.
Anyị na-agbanwe ụwa, mana nke a bụ mmalite. Egela ntị na njikọ njikọta nke Pọl ma dọpụta plọg na usoro nke nwere mmetụta dị ịtụnanya!
Facebook na Twitter
Paul kwesịrị ịma na anyị biri n'oge ogbo na ntanetị ebe otu onye na-emekọ ihe ọnụ na-enye ụzọ maka ozi niile - ọ bụ AOL, nke a na-akpọ AOhelL mgbe ụfọdụ. Facebook bụ nke AOL nke oge a, mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Chọpụta na ọ nwere ya ebe. Anọ m na Facebook ma ndị niile amaara m bụ.
Onye ọ bụla nọ na AOL, kwa.
Otu onye ga - emepụta ihe ka mma karịa Facebook, ekwere m gị nkwa. Anọ m ebe ahụ ruo mgbe 'ihe ọzọ dị mkpa' pụtara. Facebook bụ mmalite, ọ bụghị ebe njedebe nke teknụzụ. Dị nnọọ ka MySpace n'ihu ya, Facebook, ga-agabigakwa.
Twitter bu ihe di egwu. Ahuru m gi n'anya twitter ma nwee obere oge. Ọ bụ usoro pụrụ iche nwere ọtụtụ ikike. Echeghị m na anyị nọ na ọkara ụzọ akara nke etu esi etinye ya n'ọrụ n'ụzọ zuru oke. Twitter bụ onye na-ajụ ase, n'agbanyeghị, ọ dịghị ihe ọzọ.
Eze na eze nwanyị nke arentanetị ka na-achọ na Email. Teknụzụ abụọ a dị afọ iri ma nwee ọdịnihu na-enweghị njedebe. Gingde blọgụ na-eji Search eme ihe ma ọ bụ usoro nkwukọrịta nke anaghị egbochi intaneti dịka Email. Ọ bụ usoro dị egwu na nke ka na-agbanwe.
Jụọ m ihe m chere na ị ga - eme n'ime afọ 5 - Chọọ, gingde blọgụ na Email ka ga-adị na ndepụta ahụ. Facebook na Twitter agaghị adị.
Tags: Analyticsàgwà ịzụ ahịausoro nkwukọrịtanjikọgoogle webmaster ngwaọrụnkwukọrịta dị n'imeatụmatụ nkwukọrịta dị n'imeihu peejiahịa mmadụọrụ
Onlọ ọrụ nkwado
Ọkt 21, 2008 na 9:22 PM
Enweghị m ike ikwenye gị karịa Doug! Mgbe ọ gụsịrị akụkọ ya, ọ dị ka ọ dị ilu n'ihi na ọ nweghị ike ide blọgụ nke ọma iji nweta ọkwa ọ bụla. Ma eleghị anya, ọ kwesịrị ilebara anya na ihe ọ na-ede kama ịkwa ákwá na ọ gaghị enwe ike ịhazi ya ma ya mere ịde blọgụ abaghị uru.
Ọkt 21, 2008 na 10:42 PM
Hey Doug - Agụrụ m edemede Wired taa, e gosipụtara ya n'otu n'ime akwụkwọ akụkọ Smart Brief kwa ụbọchị m na-enweta. Mgbe m gụrụ ya, echere m echiche banyere gị ozugbo ma mata na ị ga-anọzu ya! O doro m anya na m kwuru eziokwu. Ya mere, gị onwe gị.
Ọkt 21, 2008 na 11:31 PM
"Oge ọ na-ewe iji mee nkọ nkọ, amamihe ịkọ akụkọ blọọgụ ka mma iji gosipụta onwe gị na Flickr, Facebook, ma ọ bụ Twitter."
Suuuuure, ka anyi kwusi edemede edemede - n'ihi na onye choro nke a ozo? N'eziokwu, ahụla m ka ndị mmadụ na-eme ụfọdụ ihe dị ịtụnanya na mkpụrụedemede 140 ma ọ bụ obere, mana kedu ka nke ahụ ga-esi dochie nnwere onwe ikwu okwu ndị mmadụ na ibipụta blọgụ ha?
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ntakịrị ihu abụọ maka Wired na-ebipụta nke a mgbe ha gosipụtara Julia Allison n'oge na-adịbeghị anya na mkpuchi ahụ, na-eto ịrị elu ya na ọnọdụ D-ndepụta site na ịde blọgụ. Gaa ọgụgụ!
Ọkt 22, 2008 na 9:17 AM
Agụbeghị m isiokwu ahụ, mana nke bụ eziokwu bụ blọọgụ maka ndị agadi dị ka m nke na-agụkarị akwụkwọ akụkọ. Ndị na-eto eto na ndị na-eto eto taa na-ede ibe ha ozi. Ha anaghị agụ ogologo oge blọọgụ (Enweghị m data siri ike iji kwado ya, nke ahụ bụ ihe m na-etinye na ya). Mgbe ndị a tweens na-eto eto bụ 20 somethings na 30 somethings, ha ka ga-enwe ha ederede ozi àgwà na ha.
Ekwela ka m mehie, blọọgụ agaghị aga, dị ka TV adịghị edochi redio. Cheta mgbe vidio ga-ehichapụ ụlọ ihe nkiri? Nke ahụ emeghịkwa.
Jason Sieckmann kwuru
Ọkt 22, 2008 na 2:33 PM
Ọ dabere na nkọwa nke 'dochie.' Hasntanetị ejirila 99% nke TV m na-ekiri ebe m na-adịghị anọdụ ala na-ekiri Daily Show ọ bụla; Naanị m na-agbanye olu mgbe m na-arụ ọrụ na blọọgụ m. Ọ bụrụ na m chọrọ ịhụ ihe, m Netflix, gaa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ (chere ndị dike), ma ọ bụ naanị zụta DVD. Igwe onyonyo, redio, na ọtụtụ ịntanetị juputara na mkpọsa ngwa ahịa nke m na-eleghara anya. Ọ dị mma, n'eziokwu, na agaghị m ekiri ọtụtụ telivishọn naanị iji zere mgbasa ozi. Ọ baghị uru n'anya m n'ihi na naanị m na-azụta fim dị egwu na egwuregwu vidio, anaghị eji anya mmiri eme ihe, echekwala m etu akwụkwọ mposi m si dị nro na ndị nzuzu Charmin. Eziokwu, bụ na ọ bụrụ na azụmaahịa anaghị anabata onwe ya site na mgbasa ozi agbakwunyere ya, ma tinyekwara na ezigbo mgbasa ozi, ọ na-ewe iwe. Banyere Wired, ònye ka na-agụ magazin? Onweghi ihe ha nwere ike imere m na ntaneti enweghị ike ime ma ọnweghị narị peeji nke mgbasa ozi.
Ọkt 22, 2008 na 7:06 PM
Enwere m otu ihe ahụ, Doug.
Ọkt 22, 2008 na 11:51 PM
Ana m ekwu na m kwenyere na Facebook dị ka ihe AOL bụ 7 afọ gara aga ma n'otu aka ahụ na Facebook ga-aga n'ụzọ nke AOL ozugbo mmadụ mere atụmatụ ka mma. Dị ka brọdband mere AOL, ndị na-ajụ ase ga-eme Facebook.
Ọkt 23, 2008 na 1:39 PM
Chaị. M hụrụ n'anya ahuhu na-aza ajụjụ.
Gingde blọgụ nwere ọtụtụ elele karịa ngwa ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ - ịmaatụ, nka okike nke ide ihe, ịmụ uche nke isiokwu (ma gbalịa ịkọwa ndị na-ege gị ntị isiokwu a), uru ahịa nke nka (eg, njikarịcha ọchụchọ, nka, njikọ na a ahịa)…
Nọgide na-alụ ọgụ Doug.
Christ, ị bụ a iberibe abụba, ilu fuck.